Virus စစ်နည်း အခြေခံ - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
Virus စစ်နည်း အခြေခံ
ဒီမှာ အခြေခံ Virus စစ်နည်းကို ရေးသားသွားပါမယ်။ တကယ်.ကို အခြေခံပါ။ ကျွန်တော်က Virus ၀င်တာ မရှိသလောက် ဖြစ်ပေမဲ.၊ Virus ၀င်တဲ. ဆွေမျိုးတွေရဲ. ကွန်ပျူတာကိုတော. Virus ရှင်းလင်းပေးဖူးပါတယ်။ ရှင်းလင်း ပေးဖူးသလောက်မှာ အများစုက Full Scan နဲ. အဆင်ပြေသွားတတ်တာ တွေ.ရပါတယ်။ မိသားစုဝင်တွေကိုလဲ အရမ်းမဆိုးရွားတဲ. Virus ကို အလွယ်တကူ ဖြေရှင်းနိုင်ဖို. အခြေခံ Virus သတ်နည်းလေးတွေ ရေးပေးပါမယ်။ ပထမဆုံး Avast နဲ. ဥပမာ ပြပါမယ်။ တခြား အကို၊ အမတွေကလဲ Antivirus အမျိုးမျိုးနဲ. စမ်းသပ်ပြမယ်ဆို အထိုင်းထက် အလွန်ပါပဲ၊
ပထမဆုံး Avast Antivirus ကို Update လုပ်ပါမယ်။ Avast Website မှာ Update file ကို download ရယူနိုင်ပါတယ်။ Update လုပ်ပြီးနောက် Avast ကို ဖွင်.ပြီး Scan Computer အောက်မှာရှိတဲ. Scan Now ကို နှိပ်ပါမယ်။ ဒါဆို ညာဘက်မှာ Quick Scan, Full system scan, Removable media scan အစ ရှိသည်ဖြင်. တွေ.ရပါမယ်။ အဲဒီထဲက Full System Scan မှာ ရှိတဲ. Start ကို နှိပ်ပေးရပါမယ်။
ပုံကို အကြီးချဲ.ရန် ပုံကို Click နှိပ်ပါ။
Full Scan လုပ်ပြီးသွားလို. Virus ကို Avast က တွေ.တယ် ဆိုပါစို.။ Threat Detected ဆိုပြီး Warning ပြပါမယ်။ ဒါဆို Show Results ကို နှိပ်ပေးပါ။
ဒီနေရာမှာတော. Avast က မိတဲ. Virus တွေကို List အနေနဲ. တွေ.ရမှာပါ။ Virus နာမည်ကို စာအုပ်တအုပ်နဲ. မှတ်သားလိုက်ပါဦး။ ပြီးရင် အောက်ဆုံး ညာဘက်ထောင်.က "Apply this action for all" ဆိုတဲ. နေရာမှာ "Move to Chest" ကို ရွေးပေးပါ။ ပြီးရင် Apply ကို နှိပ်ပါ။ (Update - Move to Chest မလုပ်ခင် Repair လုပ်လို. ရရင် Repair အရင်လုပ်ပါ။)
တကယ်လို.သာ Virus ကို Virus Chest ထဲ ပို.တာ အောင်မြင်တယ်ဆိုရင် အဲဒီ စာမျက်နာမှာပဲ Action successful ဆိုပြီး တွေ.ရမှာပါ။
Virus ကို Move to Chest လုပ်ပြီးသွားပေမဲ. လုပ်ဆောင်စရာ ပြီးဆုံးသွားပြီလား ဆိုတော. မဟုတ်ပါဘူး။ Virus Chest ထဲ ရောက်နေတဲ. Virus ကို သတ်ပေးရပါဦးမယ်။ Avast ကို ပြန်ဖွင်.ပြီး Maintenance အောက်က Virus Chest ကို နှိပ်ပေးပါ။ ဒါဆို ညာဘက်မှာ Virus Chest ထဲ ရောက်နေတဲ. virus တွေကို တွေ.ရပါမယ်။ ရှိသမျှ Virus အားလုံးကို Right Click နှိပ်ပြီး Delete ကို ရွေးပေးပြီး သတ်ပစ်လိုက်ပါ။ ဒါဆို စက်ထဲက Virus တွေကို ရှင်းလင်း နိုင်ပါပြီ။ တော်ရုံတန်ရုံ Virus မျိုးကိုတော. ဒီနည်းနဲ. သတ်ပစ်လို. ရပါတယ်။ ပြီးရင် စက်ကို restart ချလိုက်ပါ။
Last edited by g00gle; 08-08-2011 at 12:30 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 25 ဦးတို့မှ g00gle အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုခိုင်ကြီး, ကိုပိုင်, ကိုသီလ, ခိုင်မြဲ, စနိုးလေး, ပန်ပန်သက်ဝေ, မျိုးဟန်ထက်, သက်ပိုင်ဦး, သန့်ဇင်ဌေး, သူရကျော်ထားဝယ်, နေမင်းမောင်, မေထူးမောင်, မောင်ကို, မောင်ပေါ်ဦး, မောင်ကြာညို, bagothar85, bonge, kaung kin lu, ko lin, kotuntunoo, kyawswarl, minthike, thura.it, Wai Lin Kyaw, wunna313
ပြန်စာ - Virus စစ်နည်း အခြေခံ
ကို g00gle က Avast Antivirus အကြောင်းပြောတော့ ကျွန်တော်က ၀င်ရောက်ဖြည့်စွက်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ
Avast Antivirus ကီးလေးတွေ ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ် အဆင်ပြေပါစေ ကျွန်တော် သုံးနေတာတော့ အကုန်ရပါတယ်.....
Avast 5.0 free	:	C18785262H1200A0412-SP4WSBKZ
စနိုးလေး, နေမင်းမောင်, မေထူးမောင်, မှော်ပင်လယ်, သေးသေးလေး, bonge, g00gle, kaung kin lu, kotuntunoo, microsoft, minthike, thura.it, Tuntunwin.55, wunna313
စနိုး တခုလောက်မေးချင်လို့ပါ စနိုးရဲ့ စက်ထဲမှာ win32:VB-MBX [Trj], win32:Zapchast-M[Trj], win32:Ramnit-G, VBS:ExeDropper-gen[Trj] , LINK:Runner အဲ့ဒီဟာတွေ affected ဖြစ်နေတယ်လို့ ပြောပါတယ် တချို့ နာမည်တွေတော့ မမှတ်ထားမိဘူး အဲ့ဒါနဲ့ စနိုးလည်း အကို google ပြောသလို move to chest လို့မပြောင်းဘဲ တခါတည်း delete လုပ်လိုက်တယ် စနိုးသိချင်တာကလေ အဲ့လို သတ်လိုက်တာက အလုပ်လုပ်နေတဲ့ ဖိုင်တွေကို သွားဖျက်မိသလိုများ ဖြစ်သွားလား ဥပမာ ဘယ် drive အောက်က ဘယ်ဖိုင်ကိုတော့ affect ခံနေရတယ်ဆိုရင် စနိုးက ဖျက်လိုက်ရင် အဲ့ဒီ affect ခံနေရတဲ့ ဖိုင်ရော ပျက်သွားလား ခု စနိုးစက်ထဲက media player ရယ် power dvd ရယ် nero ရယ် ပရိုဂရမ်ဖိုင်မပေါ်တော့ဘဲ စက်ကရင် အပြာနဲ့ exe ပုံစံပြောင်းပြီး အလုပ်မလုပ်တော့လို့ပါ control panel ကနေ ပြန်ဖြုတ်လို့မရတော့သလို ပြန်ပြီးတော့လည်း install လုပ်လို့လည်း မရတော့လို့ပါရှင် အဲ့ဒါ ဘာလို့လဲ သိချင်လို့ပါ virus ဘဲကိုက်သွားတာလား virus သတ်ရင်းနဲ့ဘဲ ဖျက်တဲ့ထဲ ပါသွားတာလား သိချင်လို့ပါ ပြီးတော့ စနိုးစက်က ဘယ်လောက်ဆိုးလည်းဆိုရင် Ctrl+Alt+Delete နှိပ်ပြီး task manager တောင်ခေါ်လို့မရတော့ဘူး ပြီးတော့ right click နှိပ်ရင် မက်ဆေ့ဘောက်နဲ့ Error -Can't Load "VDExt800.dll",Last Error:126 လို့ဘဲ ပေါ်ပေါ်လာတယ် အဲ့ဒါကို ငါးခါခြောက်ခါလောက်ပိတ်လိုက်မှ အဆင်ပြေသွားတယ် အယ် နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ် MMonitor.exe-Unable to locate component .This application has failed to start because OlyUICtl2.dll was not found. Reinstall the application may fix this problem. ဒီမက်ဆေ့ကတော့ ဝင်းဒိုးတက်လာတာနဲ့ ပေါ်လာတယ် စနိုးမသိတာက အဲ့ဒီအတွက် ဘယ် software ကို ပြန် install လုပ်ပေးရမလဲဆိုတာလည်း မသိလို့ပါရှင် ကူညီပါနော် အားလုံးဘဲ ခင်မင်လျှက် စနိုးလေး
အောက်ပါအသင်းဝင်7ဦးတို့မှ စနိုးလေး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
နေမင်းသွေး, မှော်ပင်လယ်, သေးသေးလေး, g00gle, pannuko, thura.it, wunna313
ကျွန်တော်. အားနည်းချက်လို.ပဲ ပြောရမှာပါ။ စနိုးလေး ပြောတဲ. အတိုင်း ဒီတိုင်း ဖျက်လိုက်တာ ဖြစ်ဖြစ်၊ Move to chest ပို.ပြီးမှ ဖျက်လိုက်တာ ဖြစ်ဖြစ် တူတူပါပဲ။ အမှန်ဆိုရင်တော. အရင်ဆုံး Repair ကို လုပ်ရမှာပါ။ ကျွန်တော် စမ်းသုံးကြည်.ဖူးတဲ. တလျောက်တော. ဖိုင်တွေကို Virus infected ဖြစ်တယ်လို. ပြပေမဲ. တကယ်တမ်း နောက်ဆုံးမှာ ဖျက်လိုက်တာက virus ကိုပဲ ဖျက်လိုက်တာပါ။ နဂို ဖိုင်တွေက ကျန်တာများပါတယ်။ (ကျွန်တော် ကြုံရသလောက်ပေါ.) တခါတလေ ဗိုင်းရပ် အရမ်းဆိုးတာကြောင်. မှားပြီး ကွန်ပျူတာ ထဲက ဖိုင်တွေ ဖျက်လိုက်တာလဲ ဖြစ်ချင် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Task Manager ကတော. ဗိုင်းရပ် ၀င်တုန်းက ပိတ်ထားလို.ပါ။ ဆော.၀ဲ သုံးပြီး အားလုံးကို ပြန်ပြင်ရပါမယ်။ လောလော ဆယ်ဆယ် ကျွန်တော် မအားသေးလို. ဒီလောက်ပဲ ပြောပါရစေ။ နောက်မှ တတ်နိုင်သလောက် ကြိုးစားပြီး ဖြေရှင်း ကြည်.ပါ.မယ်။
စနိုးလေး, နေမင်းသွေး, မှော်ပင်လယ်, သေးသေးလေး, kaung kin lu, kyawswarl, minthike, wunna313
အကို google ကျေးဇူးပါ ခုလိုရှင်းပြတဲ့အတွက် အားရင်တော့ လိုအပ်မဲ့ software လေး ပြောပေးပါနော် အားလုံးဘဲ ကူညီကြပါအုန်းနော်
Last edited by စနိုးလေး; 08-08-2011 at 01:07 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ စနိုးလေး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မှော်ပင်လယ်, သေးသေးလေး, g00gle
ညီမလေးcontrol panelက ဖြုတ်လို့မရတဲ့ ဆော့ဝဲတွေကိုrevouninstaller-portableသုံးပြီး ဖြုတ်ကြည့်ပါ ပြီးရင်ပြန်တင်ကြည့်ပါ အဲဒီဆော့ဝဲတွေကို ပြီးရင် Error -Can't Load "VDExt800.dll",Last Error:126အဲဒီမက်ဆေ့နဲ့ ......OlyUICtl2.dll was not found......အဲဒီမက်ဆေ့တွေပြသေးလားတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ပါ အဲဒါမှပြသေးတယ်ဆိုရင် အောက်ကအဆင့်တွေအတိုင်းလုပ် ကြည့်ပါ
Step1: Free Download Award-Winning DLL Repair software.
အဲဒါတွေအားလုံး လုပ်ပြီးလို့မှအဆင်မပြေသေးရင် လိုအပ်တဲ့Dll ဖိုင်ကို ဒီကနေယူပြီးတော့ ပြန်ထည့်ပေးကြည့်ပါ အားလုံးပြီးသွားရင်registry repair လုပ်ပေးကြည့်ပါ task manager ပြန်ခေါ်ဖို့ program အသေးစားလေးတွေ ဖိုရမ်မှာလဲ တွေ့မိပါတယ် (ကျွန်တော်အချိန်ရတဲ့နေ့ပြန်ရှာပေးပါ့မယ် ကျွန်တော့အမှိုက်ပုံးလိုဖြစ်နေတဲ့စတစ်ထဲကနေ )အဲဒါမှအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်တစ်နည်းထပ်စဉ်းစားကြည့်သေးတာပေါ့ ခုတော့ ကျွန်တော့ကော်နက်ရှင်လေးနဲ့ဒီလောက်လေး ပဲကူညီနိုင်တာစိတ်မကောင်းပါဘူး ကျန်တဲ့ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေလဲဆက်ပြီးတော့ကူညီဖြေရှင်းပေးပါလိမ့်မယ်
Last edited by bonge; 09-08-2011 at 01:32 AM.. Reason: လင့်ဖြည့်
အောက်ပါအသင်းဝင် 10 ဦးတို့မှ wunna313 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
စနိုးလေး, မျိုးဟန်ထက်, နေမင်းသွေး, သေးသေးလေး, arkaraung, bagothar85, bonge, g00gle, kaung kin lu, minthike
ကျေးဇူးနော် ကိုကြီး ညီမလေး စမ်းကြည့်လိုက်အုန်းမယ် မရရင်တော့ ပြောပေးကြပါအုန်းနော် ဟီး အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင် ကိုကြီးရဲ့ အမှိုက်ပုံးထဲကနေ အယ်မှားလို့ စတစ်ထဲကနေ ပြန်ရှာပေးနော် အားကိုးပါတယ်ရှင် ကူညီကြပါနော် အားလုံးဘဲ ခင်မင်လျှက် စနိုးလေး
Last edited by စနိုးလေး; 13-08-2011 at 03:08 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ စနိုးလေး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
စနိုးလေး ကွန်ပျူတာက Registry တော်တော်လေး ကတိကအောက် ဖြစ်နေလို. Registry Clean လုပ်ပေးဖို. လိုပါလိမ်.မယ်။ Registry Cleaner တွေ ဖိုရမ်မှာ တင်ထားတာ တော်တော် များများ ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော် လက်လှမ်းမီ သလောက် ရှာကြည်.တော. နောက်ဆုံးအနေနဲ. ကိုသန်.ဇင်ဌေး တင်ပေးတဲ. Mz Ultimate Tools ဆိုပြီး တွေ.မိပါတယ်။ နောက် Repair Tools & Antivirus Tools များမာတိကာ ဆိုပြီး softwares အများကြီး တွေ.မိပါတယ်။ ကျွန်တော် ဒီနေ. လိုက်ကြည်.ရင်း ကြိုက်တဲ. Software တခု တွေ.မိပါတယ်။ Comodo System-Cleaner ပါ။ ဒီနေရာမှာ သူ.အကြောင်. ရေးထားပေးပါတယ်။
စနိုးလေး, မျိုးဟန်ထက်, သူရကျော်ထားဝယ်, သေးသေးလေး, bagothar85, bonge, kyawswarl, minthike, putty, Wai Lin Kyaw, wunna313
ဗိုင်းရပ်ရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာ ဘယ်လို သိနိုင်ပါသလဲ ညီ ကအခုမှ လက်တော.လေးဝယ်ပြီး သုံးနေတာပါ ကျေးဇူးပြုပြီး ဖြေကြားပေးကြပါခင်ဗျာ ညီ က မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်မှ ပညာများကို သင်ကြားနေသူပါ
21-03-2012, 09:10 PM
[quote=phoe nyi;224048]ဘယ်သူမှလည်း မဖြေကြပါလာဗျာ
ပိုစ် နံပတ် ၁ မှာ ပြေားထားတယ်လေ သေချာလေဖက်ကြည်ပါအုံးးး................................ ....................................................................
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ smlat88 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
စက်စတင်အသုံးပြုမည့်စ အချိန်နဲ့ စက်ပြန်လည်ပိတ်သိမ်းသည့် အချိန်တို့အား သေချာစွာအသုံးချနိုင်လျှင် မည့်သည့် အကောင်မှ တော်ယုံတန်ယုံ မ၀င်နိုင်ပါဘူး
လုပ်ဆောင်ပုံအဆင့်ဆင့်နှင့် လုပ်ပုံလုပ်နည်းများပါ ထည့်ပြီးသားဖစ်ြပါသည်
ကွန်ပြူတာမှာ Virus ရှိပါပြီ Task Manger, Folder Options and Registry ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း poekaunglay87 Virus & Anti-virus ပိုင်းဆိုင်ရာ 19 21-03-2012 10:28 PM
Online Virus Scanners များအကြောင်း KznT Virus & Anti-virus ပိုင်းဆိုင်ရာ028-03-2011 08:31 PM